फेसबुकबाट ला’ इभ आएर किन यस्तो भ’ यानक क’ दम चालिन यी युवतीले ? – Suchana Hub
फेसबुकबाट ला’ इभ आएर किन यस्तो भ’ यानक क’ दम चालिन यी युवतीले ?
काठमाण्डौ । अहिले कोरोना भाइरसको प्र* कोप फैलिएका कारण प्राय सबैतिर लक डाउन गरिएको छ । करिब अढाई महिनापछि असार १ गतेदेखि काठमाण्डौ लगायतका ठाउमा लकडाउन की खुकुलो गरिएको भएपनि अहिलेसम्म पनि जनजीवन सामान्य रुपमा आउन भने सकेको छैन । यस लकडाउनको समयमा धेरैको जीवनमा आ* मुल प* रिवर्तन आएको छ । मानिसहरुले नयाँ तरिकाले जी* वन जि* उन सि* किरहेका छन् भने त्यस्तै कतिपयको जीवन निकै नै प्र* भावित बनेको छ । कतिपयले आफ्नो जीवनमा आएका प* रिवर्तन तथा नौ* लोपनलाई सजिलै स्वि* कार गरिरहेका छन् भने कतिलाई भने निकै अ* सर पारेको देखिएको छ । यसै कारणले गर्दा यी समयमा विभिन्न किसिमका घ* टनाहरु घ* टेको सुन्न पाइएको छ ।
यस्तैमा दाङबाट पनि एउटा निकै मा* र्मिक खबर बा* हिरिएको छ । दाङकी एक युवतीले फेसबूकमा लाइभ आएर आफ्नो दे* ह* त्या* ग गरेकी छिन् । ती युवतीले ला *इभ आएर नै दे* ह* त्या* ग गरेकी हुन् । तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका–५ रानीजरुवामा बस्दै आएकी अन्दाजी २३ वर्षीया एलिसा गौतमले दे* ह* त्या* ग गरेकी हुन् । उनले बुधवार राती आफ्नो फेसबूक मार्फत ला* इभ ग रेर दे* ह* त्या* ग गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुल्सीपुरले जनाएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय तुल्सीपुरका प्रहरी प्रमुख डिएसपी शिवबहादुर सिंहले ती युवतीले दे* ह* त्या* ग गरेको पु* ष्टि गरेका छन् । उनले किन यस्तो क* दम उ* ठाइन भन्ने अझै खुलेको छैन । मृ* तक युवतीको श* व अहिले पो* ष्टमा* र्टमका लागि राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुल्सीपुरमा राखिएको छ ।
यस विषयमा घ* टनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनले यसरी आफ्नो दे* ह* त्या* ग गर्नु पुर्व एउटा गित बजाएकी थिइन् । “सम्झना बि*र्सना यो सिउँदो जोगाउनु, मेरो ला* सको म* लामी तिमि हुनु ” भन्दै उनले यस संसारबाट स* दाका लागी बि* दा लिएकी हुन् । उनले दे* ह* त्या* ग गर्दा किन लाइभ आइन र किन सबैको सामु आफ्नो दे* ह* त्या* ग गर्ने निर्णय लिइन् भनेर अहिले सबैजना यस विषयमा चर्चा गरिरहेका छन् । यस खबरले अहिले सबैलाई म* र्मा* हित बनाएको छ । लकडाउनको समयमा ह* ता* सिएर दे* ह* त्या* गको निर्णय लिने उनी पहिलो व्यक्ति भने हैनन् । यसघि पनि लकडाउन कै समयका बीच यस किसिमका विविध घ* टनाहरु बाहिरी नै रहेका छन् । यस घ* टनाले सबैलाई अहिले नि* शब्द बनाएको छ ।
गोपाल ढकाल,मनोविद् : घर, परिवार, साथीभाइ, समाज लगायत कसैले मलाई माया गरेको छैन भनेर पनि कतिपयले अरुलाई देखाएर दे* ह* त्या* ग गर्न सक्छन् । कतिपय सेलिब्रेटी लगायतले दे* ह* त्या* ग गर्दा चर्चा पाएको देखेर तथा सुनेर पनि मानिसहरुको मनमा सबैलाई देखाएर दे* ह* त्या* ग गर्दा चर्चा पाइने रहेछ भन्ने सोच आउने हुँदा अरुले थाहा पाउने गरी यस्तो गरेको पाइन्छ । म म* र्दा सबैले थाहा पाउँछन् र म चर्चित हुन्छु भनेर कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा लाइभ समेत गरेर दे* ह* त्या* ग गरेको पाइन्छ । यसरी सबैको सामु आई दे* ह* त्या* ग गर्नुले मानिसको विभिन्न किसिमको मा* नसि*क*तालाई द*र्स्याउने गर्दछ । त्यसरी सामाजिक सञ्जालबाट लाइभ नै गरेर दे* ह* त्या* ग गर्नु भनेको कसैसँग बाँ* च्नका लागि सहयोग मा* गिरहेको पनि हुन सक्छ ।
सामाजिक सञ्जाल लगायतबाट दे* ह* त्या* ग गर्ने बारेमा अरुलाई जानकारी दिएपछि आफुलाई कसैले ब* चाउन आउँछन् र आफु बाँ* च्न सफल हुन्छ भन्ने मा*नसि* कताका कारण पनि यसो गरिएको हुन सक्छ । सबैलाई थाहा दिएपछि म* र्नबाट मलाई रो* क्छन् भनेर मद्दत मा* गेको हो र त्यसरी ला* इभ गर्दा पनि कोही सहयोग गर्न नआाएपछि अब मलाई सहयोग गर्ने कोही पनि रहेनछ भनेर अ* न्त्यमा म* र्ने निर्णय नै गर्न सक्छन् । कतिपयले त रि* सले म* रेर देखाइदिन्छु भन्ने सोचेर पनि सामाजिक सञ्जाल लगायतबाट सार्वजनिक गर्छन् । मानिस विभिन्न किसिमको समयबाट गु* ज्रिरहेको हुन्छ । कतिपय अ* वस्थामा उसले आफ्नो पि* डा पो* ख्ने ठाउँ नपाउँदा पनि यसरी सबैको सामु आएर आफ्नो दु* ख व्य* क्त गर्ने गर्दछन । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।
साथै यसको अर्को कारण डि* प्रेसन पनि हुन सक्छ । सेरोटोनिन् र डोपामिन जस्ता हार्मोनको क*मीले मानिसलाई डि* प्रेसन हुन्छ भने डि प्रेसन लगायतको मा*नसिक रो* गका कारणले यो* जनाब*द्ध तरिकाले मानिसले दे* ह* त्या* ग गर्ने सम्भावना पनि बढी हुन्छ । डि* प्रेसनमा मानिस अ*न्यन्तै दुः खी हुन्छ र उसलाई आफ्नै जीवनदेखि दि* क्क लाग्न थाल्छ । डी* प्रेसनमा गएको मानिसले आफुलाई संसारमा ए* क्लो महसुस गर्छ र मानिसले मृ* त्युको बाटो रोज्छ । डि* प्रेसन भएका व्यक्तिले मर्ने बारेमा पूर्वतयारी गर्नुका साथै योजना बनाएर पनि दे* ह* त्या* ग गर्दछन् । उअसले म म* र्दैछु भन्ने निर्णय गरेको हुन्छ भने म* र्नुपूर्व योजना बनाएका व्यक्तिमा म दे* ह* त्या* ग गर्ने समयमा कसैले मलाई देख्छ, थाहा पाएपछि मलाई ब* चाउन आउँछन् अनि म बाँ* च्छु भन्ने पनि हुन्छ ।
Previous २३ वर्षीया एलिसा गौतमले फेसबुकबाट लाइभ गरेर गरिन देहत्याग , भिडियो सहित
Next नेपालको यो एयरलाइन्सका पाइलट र एयरहोस्टेजलाई कोरोना पुष्टि, प्रहरी अस्पताल भर्ना गरियो [को हुन् त]